Adeel Akhter | September 27, 2017
Hotel marketing can be tricky if you don’t convey the right messages to your audience, that too at...
Adeel Akhter | July 26, 2017
Meet The Beautiful Megan. A Travel Blogger Who Got Kissed By A Giraffe
Jovago Myanmar recently interviewed Megan,afemale travel blogger. She has also participated in2roundup posts of...
Jovago | May 23, 2017
အားလပ်ရက်မှာ ငပလီကို အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်နေလား။ ဒီစာရင်းလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ငပလီကမ်းခြေရောက်ရင် မဖြစ်မနေ၀င်စားသင့်တဲ့ ဒေသခံ စားသောက်ဆိုင်အချို့ပါဝင်ပါတယ်။ တောမြိုင်သူ ကြက်အာပူဆိုင် ရခိုင်ရိုးမအတက် ဂွ- ငါးသိုင်းချောင်းလမ်း မှာရှိတဲ့ ကြက်အာပူထမင်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။...
ထားဝယ်မြို့အကြောင်း ထားဝယ်မြို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ ၁၁ ရာစုနဲ့ ၁၃ ရာစုကြားမှာ ထားဝယ်ဟာပုဂံအင်ပါယာရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ ထားဝယ်မြို့ဟာ တနင်္သာ ရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ထားဝယ်အထူးစီးပွာရေးဇုန်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့...
Top places to visit in Dawei
About Dawei Dawei is located in Taninthayi Division, South-eastern of Myanmar. During the 11 to 13 century, Dawei...